DEG DEG;- Ahlusuna oo Amar dul dhigtay Degmooyinka ay maamusho ee Galmudug. - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
DEG DEG;- Ahlusuna oo Amar dul dhigtay Degmooyinka ay maamusho ee Galmudug.
August 12, 2019 5:19 PM - Written by Warbaahinta Allool News GKC
Sidda ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii shirkaasi ka qeyb galay Ahlusunna ayaa ogeysiisay maamulada degmooyinka in uu jiro Khilaaf ku aadan Ahlusunna iyo dowladda dhexe maadaama aan la fulin qodobadii lagu heshiiyay qaarkood.